Wednesday September 26, 2018 - 11:49:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaal caan ah ayaa khudbado ka jeediyay xarunta Q.Midoobe xilli xiisada colaadeed ay ka aloosanyihiin caalamka daafihiisa, Donald Trump hoggaamiyaha Mareykanka ayaa golaha ka hor jeediyay khudbadii ugu saameynta badneed.
Trump oo khudbaddiisu ubadneed faan iyo xayaysiin uu u sameynayay maamulkiisa ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday dowladaha iiraan iyo ruushka oo dhanka siyaasadda ay isku khilaafsanyihiin.
isagoo hadlayay ayuu sheegay in Mareykanku uu dhan walba uga horreeyo caalamka, intii uu khudbadiisa ku gudaha jiray ayuu yiri "intii uu maamulkeygu jiray waxaa meel sare gaaray dhaqaalaha Mareykanka, waxaan noqonay dowlad caalamka u horseedday baraare aad baan ula dagalalamay argagaxisada waxaan gacan ka geystay in hubka wax baabi'iya uusan caalamka ku faafin, dowladeydu waxay wax ka qabatay dagaalka ahliga Yemen".
Wargeyska New York Times ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in Trump uu been ka hor akhriyay madaxda caalamka islamarkaana uu Fowdo siyaasadeed kusoo kordhiyay caalamka wuxuu wargeysku farta ku fiiqay in dhaqaalaha Mareykanka uu dhulka kusii hoobanayo, wargeyska ayaa tusaale usoo qaatay heerka shaqa la'aanta oo Bulshada Mareykanka dhaxdeeda kusii badanaya.
Madaxweynaha iiraan Xasan Ruuxaani ayaa isna jeediyay khudbad saameyn badan reebtay isagoo weerar ku qaaday maamulka Trump kuna tilmaamay mid khalalaase adduunka u horseeday.
Madaxweynaha Turkiga Erdogaan ayaa isna khudbaddiisa kusoo hadal qaaday dagaalka Suuriya wuxuu ku faanay in xoogaga Jihaadiga ah uu ka saaray magaalada Idlib uuna dhaqan gelin doono heshiiskii uu lagalay Faladamiir Putin balse wuxuu muujiyay raja xumo inta Bishaar Al-asad uu madaxda ka yahay xukuumadda Dimishiq kajirta.